“Horumar ma gaari doontid intaad ka hoos ciyaareyso Lionel Messi.”. Neymar oo loogu baaqay inuu isaga tago Barcelona – Gool FM
“Horumar ma gaari doontid intaad ka hoos ciyaareyso Lionel Messi.”. Neymar oo loogu baaqay inuu isaga tago Barcelona
Byare July 17, 2017
(Catalonia) 17 Luulyo 2017. Manchester United ayaa diyaarineysa lacago xoog badan si ay ula soo wareegto Neymar kaddib markii la sheegay in laacibka uu ka careysan yahay kooxdiisa.
25 jirka ayaa galaya sanadkiisii 5-aad uu ka ciyaaro Camp Nou balse waxaa la arkaa inuusan la sii joogin waqti intaa ka sii dheer.
Warsidaha Sport ee ka soo baxa dalka Spain ayaa warinaya in laacibka reer Brazil uu diyaar u yahay inuu ka tago Barca kaddib markii ay la taliyayaashiisu ugu baaqeen inuu ka dhex boxo hooska Messi oo uu ku hoos qarsan yahay.
Laacibkii hore ee Santos ayaa wax kasta ku guuleystay tan iyo sidii uu u yimid Barcelona marka laga reebo abaal marinta Ballon d’Or ee laacibka ugu fiican adduunka, inkastuu soo galay kaalinta saddexaad sanadii 2015.
“Intaad ka garab ciyaareyso Messi waxaad markasta noqon doontaa labaad, weligaa waxaad ku hoos qarsanaan doontaa hooskiisa,” Mid ka mid ah la taliyayaashiisa ayaa sidaa u sheegay.
Waxaa la sheegayaa in iminka Neymar uu wararkaa aad u dhageysanayo in ka badan sidii hore wuxuuna ka fikirayaa mustaqbalkiisa.
Sport ayaa sidoo kale daaha ka rogtay in dhammaadka kal ciyaareedkii tagay uu laacibka qadka taleefanka kala hadlay tababaraha Man United ee Jose Mourinho.
Macallinka reer Portugal ayaa la aamisan yahay inuu Neymar ku qancinayay kolkaa si uu ugu soo biiro qalcada Old Trafford isla markaana u buuxiyo booska Zlatan Ibrahimovic.
Iyadoo ay jirto qiyaas fikradeedyadii ugu dambeeyay ee laga qabo mustaqbalka laacibka reer Brazil misane Barca ayaan walaac qabin oo ku jirta xaalad xasiloon.
Wuxuu kula joogaa camaaliqada Spain heshiis ka dhacaya ilaa 2021 waxaana lagu bur burin karaa qandaraaskiisa xagaagan adduun dhan 175 muilyan oo bound taa oo sare u sii kici doonta sanadba sanadka ka sii dambeeya.
Oo waxay taa la micno tahay in sanadka soo socda lagu bur burin karo heshiiska Neymar lacago dhan 195 milyan oo bound, sanadka sii xigana 219 milyan oo bound.
Kaddib AROOSKIISA, Lionel Messi oo markii ugu horreysay dib ugu soo laabtay tababarka Barcelona….+SAWIRRO
Lucas Leiva oo tijaabada Caafimaad u maray Lazio....(10-sano kaddib laacibka oo ka tagaya Liverpool)+SAWIRRO